Raysulwasaaraha Soomaaliya oo kulamo la qaatay Amiirka Qatar - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaRaysulwasaaraha Soomaaliya oo kulamo la qaatay Amiirka Qatar
May 15, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Raysulwasaaraha Soomaaliya oo kulamo la qaatay Amiirka Qatar[Sawirka: Facebook]
Doha-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa gudaha magaalada Dooxa kulamo kula qaatay Amiirka dalka Qatar Sheikh Tamin bin Hammad Al Thani.
Labada hoggaamiye ayaa ka wadaxaajooday xiriirka u dhaxeeya labada dal, sida ay wararku sheegeen.
RW Soomaaliya ayaa magaalada Dooxa tagay asbuucii lasoo dhaafay si uu uga qeybgalo shirka Dooxa ee 2017-ka. Safarka ayaa ahaa kii kowaad oo uu Khayre ku tago dalka dibadiisa tan iyo markii uu noqday Raysulwasaare.
Dhawaaqa madaafiicda oo laga maqlay magaalada Gaalkacyo iyadoo lagu guda jiro dalbasho xabad-joojin
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dhawaaqa madaafiicda ayaa laga maqlay dhinaca koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug galabta oo Isniin ah, sida uu sheegay qof dadka deegaanka ah. Qof kamid ah dadka deegaanka ayaa warsidaha Puntland Mirror [...]